Yangu Apple Watch Haizogadzirise! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Apple Tarisa
iphone yakadonhera mumvura wont turn on
maitiro ekutaurisa iphone yangu
iripi iphone yangu yekupinda
iphone nhema skrini haibatike
Yangu Apple Watch Haizogadzirise! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Yako Apple Watch haisi kugadzirisa uye hauzive nei. Iwe unoona kuti wachi yeOSOS inowanikwa, asi iwe haugone kuikanda kana kuiisa. Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura kuti nei Apple Watch yako isingagadzirise uye ikuratidze maitiro ekugadzirisa dambudziko iri zvakanaka !
Maitiro Ekuvandudza Yako Apple Tarisa Iyo Yakajairwa Nzira
Kazhinji, iwe unogadziridza yako Apple Watch nekuenda kuWatch app pane yako iPhone uye tapping General -> Software Kwidziridza . Kana inogadziridza iripo, pombi Dhawunirodha uye Isa .
Nekudaro, iwe pamwe watoedza izvi uye ndosaka wakatsvaga ichi chinyorwa! Matanho pazasi achakubatsira kugadzirisa dambudziko kana yako Apple Watch isinga gadzirise, kunyangwe imwe iripo.
Dzorera Yako Apple Tarisa Kubva Uye Kudzoka Pairi
Pane mukana mudiki wekuti diki tekinoroji glitch ndicho chikonzero nei yako Apple Watch isinga gadzirise. Nekutangazve yako Apple Watch, ese ayo madiki zvirongwa anogona kuvhara pasi zvakajairwa uye kutanga zvakare nyowani paunodzorera yako Apple Watch kumashure.
zvinorevei kana mumwe munhu akarota pamusoro pako kufa
Kudzima yako Apple Watch, tinya uye bata Bhatani bhatani kusvikira iyo Power Off inotsvedza inoonekwa pachiso chewatch. Slide iyo diki simba icon kubva kuruboshwe kurudyi kuvhara yako Apple Watch. Mirira maminetsi gumi neshanu, wobva wadzvanya uye bata bhatani reSide kuti udzorere Apple Watch yako kumashure.
Ita shuwa kuti Apple Watch Yakabatanidzwa kune Wi-Fi
Chimwe chezvinhu zviviri zvakakosha zvekuvandudza watchOS pane yako Apple Watch ndechekuti inofanirwa kuve yakabatana neWi-Fi. Neraki, kana yako iPhone yakabatana neWi-Fi, yako Apple Watch ichave yakabatana neWi-Fi zvakare sekureba sekuti zvishandiso zviri pairi uye zviri mukati meumwe weumwe.
Kutanga, ita shuwa kuti yako iPhone yakabatana neWi-Fi nekuenda ku Zvirongwa -> Wi-Fi . Kana iwe ukaona cheki cheki cheki padivi pezita reweti yako yeWi-Fi kumusoro kwemenu iyi, yako iPhone yakabatana neWi-Fi.
iphone xs max haidzime
Kana uchinge waita chokwadi chekuti iPhone yako yakabatana neWi-Fi, ita shuwa kuti yako iPhone neApple Watch zviri mukati mezvimwe. Kunyangwe iwo matsva eApple Watches akavakwa neBluetooth 4.0 (ichivapa huwandu hweanosvika mazana maviri emamita), zvirinani kubata yako Apple Watch padhuze ne iPhone yako paunenge uchivandudza watchOS.
Ita shuwa Kuti yako Apple Watch Ine 50% Bhatiri Hupenyu
Chechipiri chikuru chinodiwa kugadzirisa Apple Watch ndechekuti inoda kuve neinenge 50% yehupenyu hwebhatiri. Unogona kutarisa kuti hupenyu hwebhatiri hwakadii neApple Watch yako nekusvetuka kubva pasi pechiso chewatch. Mukona yekumusoro yekuruboshwe kwechiratidziro, iwe uchaona kuti chii chikamu chebhatiri chasara pane yako Apple Watch.
Kana yako Apple Watch iine isingasviki 50% hupenyu hwebhatiri, isai pane yayo yemagineti yekuchaja tambo. Iwe uchiri kukwanisa kurodha pasi uye kugadzirira iyo watchOS yekuvandudza kunyangwe yako Apple Watch iine isingasviki 50% yehupenyu bhatiri.
Kana iwe ukaedza kuisa wachi yeOSOS isati yabhadhariswa kusvika padanho re50%, uchaona ziviso pazasi.
zvinorevei kurota bere dema
Tarisa Iyo Inochengeterwa Space Pane Yako Apple Watch
Chimwe chezvikonzero zvakajairika nei Apple Watch isinga gadzirise ndeyekuti hapana nzvimbo yekuchengetera yasara yekurodha pasi iyo yekuvandudza. Kazhinji, zvigadziriso zveOSOS zvinoda anosvika mazana maviri MB (megabytes) enzvimbo yekuchengetera nekumisikidza pane yako Apple Watch.
Iwe unogona kutarisa kuti uone kuti yakawanda sei nzvimbo yekuchengetera chero yakapihwa wachi yeOSOS mukutsanangurwa kweyekuvandudza. Chero bedzi yako Apple Watch iine yakawanda yekuchengetera nzvimbo kupfuura saizi yeiyo watchOS yekuvandudza, iyo yekuvandudza ichakwanisa kuisa.
Kuti utarise kuti yakawanda sei nzvimbo yekuchengetera yawasara paApple Watch yako, enda kuApple app pane yako iPhone uye tap General -> Kushandisa pane yako Apple Watch. Pamusoro peiyi menyu, iwe uchaona kuti yakawanda sei nzvimbo yekuchengetera inowanikwa pane yako Apple Watch.
Tarisa Kune Apple Server Nyaya
Pane mukana mudiki wekuti mavhavha eApple apunzika nekuti vazhinji vashandisi veApple Watch vese vari kuyedza kugadzirisa kune ichangoburwa watchOS panguva imwe chete. Izvi zvinowanzoitika pamazuva mashoma ekutanga esoftware yekuvandudza, senge apo Apple yakaburitsa pachena iOS 11 yeiyo iPhone, iPad, uye iPod munaGunyana 2017.
Apple ine yakazara system chinzvimbo peji izvo zvinokuzivisa iwe kana maseva avo ari kumusoro uye achimhanya. Kana iwe ukaona akawanda matsvuku madhodhi pane ino peji, panogona kuve nenyaya nemaseva eApple. Kana paine nyaya yeserver, Apple inoziva nezvedambudziko uye vari kurigadzirisa paunenge uchiverenga chinyorwa ichi.
Kana yako Apple Watch ichiri kusiri kuvandudza, panogona kunge paine chinyorwa chepasi che software chinokonzera dambudziko. Kana iwe wakashanda kuburikidza nhanho dzese dziri pamusoro, inguva yekuyedza kubvisa zvese zvirimo uye marongero ako Apple Watch.
foni yangu inoramba ichibvisa mafoni
Paunoita nhanho iyi, ese ako eApple Watch marongero anozogadziriswazve kune zvigadzirwa zvefekitori uye zvese zvako zvemukati (mimhanzi, mapikicha, nezvimwewo) zvichabviswa zvachose. Zvichava sekunge iwe wabvisa yako Apple Watch kubva mubhokisi kekutanga nguva.
Ongorora: Mushure mekubvisa zvese zvirimo uye marongero pane yako Apple Watch, iwe uchave uchizvibatanidza kune yako iPhone kamwe zvakare.
Vhura iyo Zvirongwa app pane yako Apple Watch uye tinya General -> Seta -> Bvisa Zvese Zvemukati uye Zvirongwa . Iwe unozokurudzirwa kuisa yako pasipoti, wobva wadzvanya Bvisa zvese apo yambiro yekusimbisa inowanikwa.
yangu ipad mweya haizobhadharise
Mushure mekubatanidza yako Apple Watch kune yako iPhone zvakare, edza kukwidziridza watchOS nekuenda kuGeneral -> Software Gadziriso mune yako iPhone yeWatch app. Kana iwe ukaona meseji ichiti 'Software yako yazvino', yako Apple Watch yakazvimisikidza pachayo panguva yekugadzirisa maitiro.
Shanyira Yako Yemunharaunda Apple Chitoro
Kana iwe wakadzima zvese zvirimo uye marongero pane yako Apple Watch, asi zvakadaro haisi kuvandudza, ipapo iwe uchazoda kuti itariswe neApple mushandi. Pane mukana weiyo kanyanga inobatanidza yako iPhone neWi-Fi kana kanyanga inobatanidza yako Apple Tarisa kune yako iPhone yakanganisika. Usati waenda, tinokurudzira kuronga musangano saka haufanire kumira wakakomberedza Apple Store masikati ese.
Yako Apple Watch Yakagadziridzwa!
Iwe wakabudirira kuvandudza watchOS pane yako Apple Watch! Tinovimba iwe uchagovana chinyorwa ichi pasocial media kuti iwe ugone kudzidzisa mhuri yako neshamwari zvaunofanira kuita kana yavo Apple Watch isinga gadzirise. Inzwa wakasununguka kusiya chero mimwe mibvunzo yeWOSOS muchikamu chemashoko pazasi!